Asa 13 - Ny Baiboly
Asa toko 13
Ny nankanesan'i Piera sy Barnabe tany amin'ny jentily - Ny nanjò an'i Elimasy mpamoha angatra - Ny nitorian'i Paoly tany Antiokia any Pisidia - Ny nibebahan'ny jentily sy ny nikiribibian'ny Jody.
1Tao amin'ny Eglizy tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra: dia Barnabe sy Simeona izay atao hoe Mainty, Lisiosa avy any Sirena, sy Manahena izay niolo-nono tamin'i Heroda Tetrarka, ary Saoly. 2Raha nanao fanompoam-pivavahana tamin'ny Tompo sy nifady hanina izy ireo, dia hoy ny Fanahy Masina taminy: Atokany ho ahy Saoly sy Barnabe, mba hanao ny asa izay niantsoako azy. 3Koa nony avy nifady hanina sy nivavaka izy ireo dia nametra-tànana tamin'izy roa lahy, vao nandefa azy handeha.
4Dia nirahin'ny Fanahy Masina Saoly sy Barnabe, ka lasa nankany Seleosia, mba hiondrana an-tsambo eo, ho any Sipra. 5Nony tonga tany Salamina izy, dia nitory ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny sinagogan'ny Jody; nentin'izy ireo hiaraka taminy koa i Joany ho mpanampy azy. 6Ary rahefa nitety ny nosy manontolo izy ireo ka tonga tany Pafosy, dia nahita Jody anankiray atao hoe Barjeso, mpamoha angatra sy mpaminany sandoka, 7izay nitoetra tao amin'ny governora Serjio Paoly lehilahy hendry. Nampanalain'ity governora i Barnabe sy Paoly, fa naniry handre ny tenin'Andriamanitra izy. 8Nefa nanohitra azy roa lahy Elimasy ilay mpamoha angatra (fa izany no dikan'ny anarany), ka nitady hisakana ny governora tsy hanaiky ny finoana. 9Tamin'izay dia feno ny Fanahy Masina i Saoly, izay atao hoe koa Paoly, ka nibanjina azy, 10sy nanao taminy hoe: Akay ry ilay feno fitaka sy hafetsen-dratsy ity, zanaky ny demony sy fahavalon'ny marina rehetra! Tsy hitsahatra ny hampivily ny làla-mahitsin'ny Tompo va ialahy? 11Ary indro ankehitriny, hamely an'ialahy ny tànan'ny Tompo, ka ho jamba tsy hahita ny masoandro ialahy mandra-pahatongan'ny fotoana. Niaraka tamin'izay, dia nosaronan'ny aizim-pito izy, ka nikorapaka nitady olona hitantana azy. 12Nony nahita izany ny governora, dia talanjona ka nino ny fampianaran'ny Tompo.
13Dia niondrana an-tsambo tao Pafosy Paoly sy ny namany, ka tonga tany Perjy any Panfilia; ary nisaraka tamin'izy ireo teo i Joany, ka lasa niverina tany Jerosalema. 14Fa izy ireo kosa niala tany Perjy, dia tonga tany Antiokia any Pisidia, ary niditra tao amin'ny sinagoga izy tamin'ny andro sabata, ka nipetraka teo. 15Nony vita ny famakiana ny bokin'ny Lalàna sy ny mpaminany, dia nilaza tamin'izy ireo ny lehiben'ny sinagoga nanao hoe: Ry rahalahy, ataovy raha misy teny famporisihana holazainareo amin'ny olona.
16Dia nitsangana Paoly, nanofa tànana azy hangina, ka nanao hoe: Mihainoa, ry Israelita, sy hianareo izay matahotra an'Andriamanitra. 17Ny Andriamanitr'izao vahoaka Israely izao no efa nifidy ny razantsika, sy nanandratra ny vahoaka fony izy nitoetra tany Ejipta; ary tamin'ny sandry mahery no nanesorany azy tao. 18Namelona azy tokony ho efa-polo taona tany an'efitra izy, 19ary nony efa nandrava firenena fito tany amin'ny tany Kanaana izy dia nanome ny faritanin'ireny ho fananany, 20tokony ho dimam-polo sy efa-jato taona. Taorian'izany dia nomeny mpitsara izy ireo, hatramin'i Samoely mpaminany. 21Nony afaka izany dia nangataka mpanjaka izy ireo, ka nomen'Andriamanitra an'i Saoly zanak'i Sisy, lehilahy avy amin'ny fokon'i Benjamina, naharitra efa-polo taona. 22Nony nesoriny kosa indray i Saoly, i Davida no natsangany ho mpanjakan'izy ireo,dia ilay nankatoaviny tamin'ny teny hoe: Efa hitako Davida zanak'i Jese, lehilahy araka ny foko, izay hanao ny sitra-poko rehetra. 23Avy tamin'ny taranany no namoahan'Andriamanitra an'i Jesoa, araka ny nampanantenainy, ho Mpamonjy an'Israely. 24Talohan'ny nahatongavany anefa, dia Joany no nitory batemim-pibebahana tamin'ny vahoaka Israely rehetra; 25ary rahefa nadiva ho tapitra ny dian'i Joany, dia hoy izy: Tsy izaho no ilay andrasanareo, fa indro avy ao aoriako izy, ka tsy mendrika ny hamaha ny kofehin-kapany akory aho.
26Ry rahalahy taranak'i Abrahama, sy ireo matahotra an'Andriamanitra eo aminareo koa, ho antsika indrindra no nampitondrana ny tenin'izao famonjena izao, 27satria ry zareo monina any Jerosalema sy ny lehibeny dia tsy nahalala azy, ka nahatanteraka ny tenin'ny mpaminany izay vakìna isan-tsabata, tamin'ny nanamelohany azy; 28ary na dia tsy nahita izay tokony hanamelohana azy ho faty aza izy ireo, dia nangataka ny hamonoana azy tamin'i Pilaty. 29Tanterak'izy ireo ny zavatra rehetra voasoratra momba azy, vao nesoriny tamin'ny hazo izy, ka naleviny tao am-pasana. 30Fa Andriamanitra kosa nanangana azy tamin'ny maty. 31Ary niseho nandritra ny andro maromaro tamin'izay niara-niakatra taminy avy tany Galilea ho any Jerosalema izy, ka dia ireo no vavolombelony amin'ny vahoaka ankehitriny. 32Ary izahay koa mitory aminareo ilay teny napetraka tamin'ny razantsika, 33fa notanterahin'Andriamanitra tamintsika zanak'izy ireo izany, tamin'ny nananganany an'i Jesoa tamin'ny maty, araka izay voasoratra amin'ny Salamo faharoa hoe: Zanako hianao; izaho no niteraka anao androany. 34Ary voalazany fa natsangany tamin'ny maty izy, ka tsy hiverina amin'ny lò intsony, tamin'ny teny hoe: Homeko anareo ny fanambinana nanomezan-toky an'i Davida; 35ary tamin'ny teny hafa koa hoe: Tsy havelanao ho tratry ny lò ny Masinao. 36Raha Davida aloha, dia nody mandry izy rahefa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny androny, ka nakambana tamin'ny razany, sy tratry ny lò; 37fa izay natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty no tsy tratry ny lò.
38Aoka ho fantatrareo àry, ry rahalahy, fa izy ihany no itoriana famelan-keloka aminareo, ary ny ota rehetra tsy nahazoanareo fanamarinana tamin'ny Lalàn'i Moizy, 39dia ao aminy no anamarinana an'izay rehetra mino mba ho afaka amin'izany. 40Koa mitandrema hianareo fandrao dia iharan'izay voalazan'ny mpaminany hoe: 41Mihevera, ry mpamotsifotsy, ka migagà sy levòna hianareo; fa izaho hanao zavatra anankiray amin'ny andronareo, dia zavatra tsy hinoanareo na dia holazaina aminareo aza.
42Nony nivoaka izy ireo, dia nangatahany mba hilaza izany teny izany indray amin'ny sabata manaraka. 43Rahefa nirava ny fiangonana, dia betsaka ny Jody sy ny proselita nanompo an'Andriamanitra no nanaraka an'i Paoly sy Barnabe, ary izy roa lahy kosa niresaka tamin'izy ireo sy namporisika azy haharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. 44Tamin'ny sabata nanaraka, dia saika tafangona hihaino ny tenin'Andriamanitra avokoa ny tao an-tanàna rehetra. 45Fa feno fialonana ny Jody nony nahita izany vahoaka be izany, ka sady nanohitra ny teny nolazain'i Paoly no nanevateva azy. 46Tamin'izay Paoly sy Barnabe dia niteny tamin-kasahiana hoe: Hianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra voalohany indrindra; nefa noho hianareo mandà azy sy manao ny tenanareo ho tsy mendrika ny fiainana mandrakizay, dia indro hankany amin'ny jentily izahay. 47Fa toy izao no nandidian'ny Tompo anay: Efa nantsangako ho fahazavan'ny jentily hianao, mba hitondra famonjena hatramin'ny fara vazan-tany. 48Faly ny jentily nony nandre izany, ka nankalaza ny tenin'ny Tompo, ary nino avokoa izay rehetra voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay.
49Dia niely eran'izany tany izany ny tenin'ny Tompo. 50Nefa notarihin'ny Jody ny vehivavy tia vavaka sy ambony toetra, mbamin'ny loholona tao an-tanàna, ka nampanenjika an'i Paoly sy Barnabe, sy nandroaka azy hiala amin'ny taniny. 51Tamin'izay, izy roa lahy nanintsana ny vovoka tamin'ny tongony hiampanga an'ireo, dia lasa nankany Ikonioma, 52ary ny mpianatra kosa, feno hafaliana sy Fanahy Masina. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0456 seconds